ह्वात्तै बढ्यो डलरको भाउसँगै आज यी देशका मुद्राको भाउ.. - jagritikhabar.com
ह्वात्तै बढ्यो डलरको भाउसँगै आज यी देशका मुद्राको भाउ..
१६ फाल्गुन, काठमाडौं ।
आज नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस यस्तो छ साउदी,कतार, मलेसिया लगायत देशको बिनिमय दर नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमेरिक डलरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर भन्ने बुझन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारोबारको सुपरिवेक्षण “नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ ।
सोर्ह सयले बढ्यो सुनको मूल्य, कारोबार कतिमा ?
१६ फागुन २०७८ काठमाडौं : सोमबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा फेरी ठूलो बृद्धि भएके छ । अघिल्लो दिन १४ सय रुपैयाँले घटेर ९६ हजार ६०० रुपैयाँले झरेको छापावाला सुनको मूल्य आज फेरि १६ सय रुपैयाँले वृद्धि भएको हो ।
बढेको मूल्यअनुसार आज छापावाला सुन प्रतितोला ९८ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य समेत आज तोलामा १६ सय रुपैयाँले नै बढ्दै ९७ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
यता चाँदीको मूल्य भने अघिल्लो दिनको तुलनामा तोलामा ४५ रुपैयाँले वृद्धि हुँदै आज एक हजार ३ सय ४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।